DEG DEG: Askar ka tirsan Ciidamada dowlada oo lagu dilay qarax miino oo lagula eegtay duleedka Balcad. | Wakaaladda Wararka Hiilnews
DEG DEG: Askar ka tirsan Ciidamada dowlada oo lagu dilay qarax miino oo lagula eegtay duleedka Balcad.
Isniin,September.11,2017(HNN) Ugu yaraan shan askari oo ka tirsan Ciidamada dowlada ayaa ku dhimatay kadib markii Qarax miino lagula eegtay inta u dhexeysa degmada Balcad ee gobolka shabeellaha dhexe iyo deeganka Gololey.
Qaraxan miino ayaa waxaa sido kale ku dhawacmey Askar ka tirsan ciidamada dowlada oo saarna gaariga qaraxa miinada u haleelay.
Ciidamadan Weerarka lala eegtay ayaa la sheegay inay ku sii jeedeen Magalaada Jowhar waxan dhowr mar sido oo kale qarax miino lagula beegsaday ciidamo ka tirsan dowlada Federaalka deegano ku dhow Magalaada Balcad.
Ugu dambeyntii Ma aha markii ugu horeysay ee weerar miino loo adeegsado uu ka dhaco wadada u dhexeysa degmada Balcad iyo deegaanka Gololey hase yeeshee weerarkan ayaa ku soo beegmaya iyadoo magaalada Jowhar ay ka socoto qabanqaabada doorashada Madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle.